Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa Soo-saare Websaydh Cusub oo Blackmagic HD | NAB Show News | 2020 NAB Show Iskaashatada Warbaahinta iyo Soosaaraha NAB Show LIVE. Warka Injineeriyada ee Warbaahinta
Bogga ugu weyn » News » Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa Soo Bandhige Websaydh Cusub Blackmagic HD
Wareejiye warbaahineed oo cusub oo loogu talagalay da'da qulqulka waxaa ka mid ah H.264 encoder awood leh oo loogu talagalay socodka tooska ah ee YouTube, Facebook, Twitter iyo wixii intaa ka badan!
Fremont, CA, USA - Arbaco, 17 Febraayo 2021 - Blackmagic Design maanta ayaa ku dhawaaqay soo-saaraha Webka Blackmagic cusub HD, xal isdabajoog ah oo isdaba-joog ah oo ay kujirto processor-ka tayada sare leh ee H.264 oo loogu talagalay qulqulka tooska ah ee barnaamijyada sida YouTube, Facebook, Twitter iyo wixii intaa ka badan. Soo Bandhigaha Shabakada cusub HD waa naqshad iswaafajsan oo ay kujirto soo galinta 12G-SDI oo leh hoos ujeeda, sidaa darteed macaamiisha way kuxiran karaan HD or HD Ultra qalabka iyo qulqulka fiidiyowga 1080p buuxa. Sidoo kale waxaa kujiray waxaa lagu dhisay gudiga hore oo leh LCD iyo menus, USB webcam muuqaalada, oo lagu daray soo saarid kormeer oo gaar ah oo leh mitir maqal ah, xaalada socodka iyo SDI buuxa iyo faahfaahin farsamo maqal ah oo gundhig ah.
Blackmagic Web Presenter HD ayaa isla markiiba la heli karaa Blackmagic Design iibiyeyaasha caalamka oo dhan $ US $ 495.
Blackmagic Web Presenter waa xal dhammaystiran oo qulqulaya oo ay kujiraan mashiin farsameeya qalabka socodka si toos ah loogu sii daayo Ethernet ilaa YouTube, Facebook, Twitter iyo wixii intaa ka badan. Waa sida telefishanka casriga ah ee warbaahineed ee loogu talagalay dhagaystayaasha cusub ee caalamiga ah. Waxaa sii dheer ku-xirnaanta USB-ku wuxuu u shaqeeyaa sida kamarada webka, sidaa darteed macaamiisha ayaa ku xiri kara kumbuyuutar waxayna isticmaali karaan softiweer kasta oo wax duubaya, ama xitaa Skype ama Zoom. Xilliga dib u dhigista, macaamiisha waxay ku qulquli karaan internetka iyaga oo adeegsanaya Ethernet ama waxay ku xirayaan taleefanka 5G ama 4G si ay u isticmaalaan xogta moobiilka. Soo Bandhigaha Shabakada sidoo kale waxaa kujira wax soo saar farsamo oo kormeer ah oo ay kujiraan fiidiyow, mitir maqal ah, jaantusyo isbeddel ah iyo xitaa xogta farsamada SDI
Blackmagic Web Presenter wuxuu taageeraa barmaamijyada ugu caansan ee qulqulka. Dheeraad ah oo lagu dhisay mashiinka qulqulka qalabka ayaa loogu talagalay in si toos ah loogu soo bandhigo tayada baahinta xirfadeed. Taas macnaheedu waa macaamiisha waxay helayaan xal iskiis ah oo loogu talagalay qulqulka tooska ah ee shaqeynaya iyagoon hoos u dhicin. Macaamiisha kaliya waxay u baahan yihiin inay ku xiraan internetka. Dejintu waa fududahay, maadaama barnaamijka softiweerka Adeegga Soo-gudbiyaha Adeeggu (Web Presenter Utility) uu macaamiisha u oggolaanayo inay doortaan barxadda socodka oo ay cusbooneysiiyaan furaha socodka.
Blackmagic Web Presenter waa xal iskiis u kooban oo ay ka mid yihiin kumbuyuutar awood leh, softiweer loogu talagalay isku xirka barnaamijyada qulqulka, iyo isku xirnaanta shabakadda. Taas macnaheedu waa macaamiisha uma baahna inay iibsadaan kombiyuutar qaali ah ama isticmaalaan barnaamijyo qulqulaya oo adag. Si fudud ku xir ilaha fiidiyowga SDI sida aaladda wax soosaarka tooska ah ama kamarad, ka dibna ku xir internetka adoo adeegsanaya dhismaha Ethernet. Ama ku dheji taleefanka gacanta si aad u isticmaasho xogta moobiilka. Iyada oo loo sameeyay dejimaha loogu talagalay dhufto ee caanka ah, macaamiisha waxay si fudud ugu baahan yihiin inay galaan furaha durdurinta oo ay ku cadaadiyaan hawada. Macaamiisha lagu daray waxay isku mar isticmaali karaan soosaarka websaydhka USB si ay ugu xirmaan kumbuyuutar, u oggolaanaya barnaamijka kale ee fiidiyowga in la isticmaalo.
Haddii isticmaaleyaashu ay ka soo baxayaan meel fog, ama macaamiisha ay u baahan yihiin keyd ah xiriirka Ethernet ee ugu weyn, macaamiisha ayaa ku dhejin kara taleefanka Apple ama Android si ay ugu xirmaan internetka iyagoo adeegsanaya xogta moobiilka. Si loo sahlo, waxaa jira isku xirnaanta USB labada dhinac hore iyo gadaal oo loo isticmaali karo in lagu xiro taleefannada. Dheeraad ah wuxuu ku shaqeeyaa telefoonnadii ugu dambeeyay ee xawaaraha sare ee 5G, iyo sidoo kale taleefannada 4G. Blackmagic Web Presenter ayaa si otomaatig ah u ogaan doona marka taleefanku ku xiran yahay isla markaana u beddelo xiriirkiisa internetka inuu isticmaalo. Macaamiisha waxay dooran karaan Ethernet ama mudnaanta taleefanka, taas oo ka dhigaysa keydka internetka taleefanka mid si otomaatig ah u shaqeynaya.
Kordhinta iswaafajinta, Blackmagic Web Presenter sidoo kale waxay leedahay laba isku xirnaanta USB oo u shaqeeya sida ilo webcam fudud. Taas macnaheedu waa macaamiisha waxay kuxiran karaan kombiyuutar kasta waxayna la shaqeyn karaan barnaamij kasta oo fiidiyoow ah. Software-ka waxaa lagu khiyaaneeyey inuu u maleeyo in soo-jeediyaha webku yahay kamarad guud oo caadi ah, laakiin runtii waa ilo fiidiyoow ah oo SDI ah oo fiidiyoow ah. Taasi waxay damaanad qaadeysaa is waafajin buuxda oo la leh barnaamij kasta oo fiidiyoow ah iyo xalka buuxa ee 1080 HD tayada. Web Presenter wuxuu la shaqeeyaa softiweer kasta oo fiidiyoow ah oo ay ku jiraan Zoom, Microsoft Teams, Skype, Open Broadcaster, XSplit Broadcaster iyo inbadan.
Soo-gudbiyeyaasha warfaafinta dhaqameed waa qalab muhiim u ah telefishanka, hase yeeshe hadda server-ka qulqulaya ayaa sidoo kale muhiim ah maxaa yeelay malaayiin daawadayaal ah ayaa daawan kara adduunka. Si loo caawiyo, Blackmagic Web Presenter waxaa ku jira soo saar farsamo hodan ah oo soo saar farsamo. Wax soosaarka kormeerka ee ku saleysan garaafyada waxaa ka mid ah muuqaal fiidiyoow ah, mitir maqal ah oo leh ballistic sax ah, jaantusyo isbeddel ah oo loogu talagalay heerarka xogta koodhka iyo buuxinta keydka, oo lagu daray soo koobidda goobaha dejinta iyo macluumaad farsamo SDI oo faahfaahsan. Ku darsiga wax soo saarka kormeerka farsamada wuxuu ku shaqeeyaa 1080 buuxa HD iyo wax soo saarka labadaba SDI iyo HDMI. Taas macnaheedu waa macaamiisha waxay u isticmaali karaan router SDI kormeerka unugyo badan, ama waxay ku xiri karaan wax fudud HDMI TV.
Barnaamijka softiweerka ee 'Blackmagic Web Presenter Utility' ayaa bixiya hal meel oo lagu maareeyo soo-bandhigayaal badan oo webka ah isla markaana loo cusbooneysiiyo dejinta iyo barnaamijka. Si fudud si toos ah ugu dheji wejiga hore ee xiriiriyaha USB ee shabakadda, ama ku xir adoo adeegsanaya Ethernet si macaamiisha ay u habeyn karaan meel fog, taas oo muhiim u ah marka isticmaaleyaashu maareynayaan goobo badan oo fog. Liiska la yaqaan iyo kontaroolada la yaqaan ayaa ka dhigaya mid aad u fudud in la sameeyo dhacdo toos ah, si macaamiisha ay si dhakhso leh ugu bilaabaan. Ku dar menusyada LCD ee hore waxay leeyihiin isku nidaam iyo kontaroolo. Barnaamijka softiweerka ee 'Blackmagic Web Presenter Utility' waxaa lagu soo daray bilaash wuxuuna ku shaqeeyaa labada barnaamij ee Mac iyo Windows.
Blackmagic Web Presenter waxaa ka mid ah soo-gelinta 12G-SDI oo leh taageero dhammaan HD iyo HD Ultra qaabab ilaa 2160p60. Soo saarida loo yaqaan '12G-SDI loop loop' ayaa lagu daray macaamiisha u suurta gelineysa inay ku wareegaan fiidiyowga iyada oo loo marayo in ka badan hal soo-saare web, sidaa darteed macaamiisha waxay u sii qulquli karaan adeegyo badan. Blackmagic Web Presenter wuxuu soo bandhigayaa tiknoolajiyadda beddelashada Teranex ee ku-biirinta SDI ee fiidiyow aad u nadiif ah oo muuqaal ah. Soo-gudbiyaha Webka Blackmagic ayaa qaata soo-galista HD or HD Ultra signalka galinta oo si otomaatig ah ugu beddelaya tayo sare, heer xog hooseeya 1080p HD, kaas oo loo diro qalabka 'H.264 encoder' oo loogu talagalay soo dejinta iyo kombuyuutarka markaad isticmaaleyso wax soo saarka webcam ee USB-ga.
Blackmagic Web Presenter waxaa ka mid ah astaamo siyaado ah si looga caawiyo hubinta macaamiisha inay khadka tooska ah ku joogaan. Macaamiilku waxay helayaan xiriir internet oo labalaab ah, sidaa darteed macaamiisha waxay ku xirmayaan internetka iyagoo adeegsanaya Ethernet-ka ama taleefanka gacanta lagu xiray ee 5G ama 4G xogta moobiilka. Waxaa sii dheer internetka si otomaatig ah ayuu u beddelaa haddii ay dhacdo in cilad ay dhacdo. Ama macaamiisha ayaa isticmaali kara 2 qaybood oo kala duwan si ay ugu sii gudbiyaan labada barnaamij ee aasaasiga ah iyo kuwa sare ee YouTube. Iyada oo la adeegsanayo AC iyo DC labadaba, macaamiisha ayaa u adeegsan kara baakad batari baahin ah awood xad-dhaaf ah.
In kasta oo Blackmagic Web Presenter u diri karo fiidiyow adeegyo kala duwan oo baahin ah, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa iskuxirka fiidiyowga SDI ee gaarka loo leeyahay ee istuudiyaha. ATEM Streaming Bridge waa badeecad fiidiyoow ah oo macaamiisha u oggolaaneysa inay ka helaan H.264 durdurka Blackmagic Web Presenter ka dibna u beddelo fiidiyowga SDI. Tani waxay ka dhigan tahay in macaamiisha ay u diri karaan fiidiyow inta u dhexeysa meelaha fog fog ee shabakadooda Ethernet-ka, ama internetka oo caalami ah. Taasi waa wax walba oo suurtagal ah sababtoo ah dhismaha H.264 koodhadhka qalabka wax lagu qoro ee soo bandhigaya qulqulka Websaydhka.
Blackmagic Web Presenter wuxuu ku saleysan yahay naqshadeynta qaabdhismeedka 'Teranex Mini design' oo u oggolaaneysa desktop ama isticmaalka sagxadda. Naqshadeynta aadka loo qaadi karo ayaa kaliya ah 5.5 inji ballaaran, taas oo macnaheedu yahay in macaamiisha ay ku dhajin karaan 3 hal cutub oo keliya, oo ku habboon marka macaamiisha ay u baahan yihiin inay u soo gudbaan adeegyo badan oo madax-bannaan oo isku mar ah. Macaamiisha lagu daray waxay isku dari karaan Blackmagic Web Presenter iyo alaabooyin kale sida ATEM Studio Studio HD beddelaha wax soo saarka tooska ah iyo xalka qulqulka ee hal cutub oo keliya.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno qaabkan cusub ee Web Presenter oo hadda leh dhammaan muuqaalada qulqulka lagu dhisay," ayuu yiri Grant Petty, oo ah agaasimaha guud, Blackmagic Design. "Tani waxay ka dhigan tahay inaadan u baahnayn wax barnaamij wax soo dejinaya ah maxaa yeelay waxay toos ugu sii socon doontaa adeegyada ay ka mid yihiin YouTube, laakiin maxaa yeelay wali waxay haysaa muuqaalka webcam-ka ee loo yaqaan" USB webcam ", waxaad ku isticmaali kartaa barnaamij kasta oo kombiyuutar ah, sida Zoom iyo Skype. Qiyaas socodka tooska ah, markaad la shirayso Zoom, dhammaantood isla waqtigaas. Waxaa sii dheer waxay leedahay wax soo saar la yaab leh oo leh macluumaad farsamo oo fara badan waxaan u maleynayaa inay warbaahintu jeclaan doonaan. Waa casriyeyn xiiso leh oo toos loogu tabinayo. ”
Xalka socodka oo dhameystiran ee YouTube, Facebook, Twitter iyo wixii intaa ka badan.
Lagu dhisay qalabka tayada leh ee baahinta qalabka H.264.
USB wuxuu umuuqdaa kamarad websaydh u oggolaanaysa taageerada dhammaan barnaamijyada fiidiyowga ah.
Soosaarka kormeerka waxaa ka mid ah mitirrada, garaafyada isbeddelka iyo xogta farsamada SDI.
Waxaa ka mid ah softiweerka Adeegga Adeegga ee Adeegsiga Mac iyo Windows.
Soo gelinta 12G-SDI oo leh hoos u beddelaad kasta HD or HD Ultra isha.
Labada isku xirnaanta AC iyo DC waxay oggol yihiin awood aan xad lahayn.
Naqshad ballaadhan oo 1 / 3aad ah ayaa u oggolaanaysa 3 durdur oo hal cutub ah.
Blackmagic Web Presenter HD waxaa hadda loo heli karaa US $ 495, marka laga reebo waajibaadka maxalliga ah iyo canshuuraha, laga bilaabo Blackmagic Design iibiyayaal caalami ah.
Sawirada alaabta ee Soo-gudbiyaha Webka Blackmagic HD, iyo sidoo kale dhammaanba Blackmagic Design alaabada, ayaa laga heli karaa www.blackmagicdesign.com/media/images.
Blackmagic Design Blackmagic Web Soo Bandhige HD 2021-02-17
Previous: Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa Kaamirada Filimka Blackmagic Pocket-ka cusub ee 6K Pro
Next: Naqshadeynta Blackmagic waxay ku dhawaaqeysaa ATEM Mini Extreme